Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဖိုးစိန်နဲ့ ဥ ရာဇဝင်
ရာဇဝင်ထဲက ဥ ပေါ့နော်...
ဆိုက်ပရက်စ် မှာ ဥတဲ့ဥ
သူလည်း ဥ ရာဇ၀င် နဲ့ ကိုး
သယ်ရင်းရေ ဥမကြိုက်ရင်း ဒီကိုပို့လိုက်
ကိုယ်က ကြက်ဥကြော်ဆို သိပ်ကြိုက်။
ကြံကြံဖန်ဖန် နော် ကိုယ်ဆို အမေက ဆော်ပြီးသားပဲ။
ဪ .. မောင်ဖိုးစိန်ရယ် ။
ကိုယ်ချင်းရယ်မှ မစာနာ ...
ဥ ... ဥ ...အဲဒီ ဥ....
ရှိတာလေး ဘာလုပ် ပစ်လိုက်လဲ ၊
ပြော ပါ ။ ပြော ပါ
ကိုဖိုးစိန်ရေ ဥရာဇဝင်လေး လာဖတ်သွားတယ်ဗျာ။ ဘာတဲ့ ဟင်းနာမည်ကလည်း သေးဥဟင်းဆိုပါပဲလားနော် အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ ကိုဖိုးစိန်
နောက်ဆို သေသေချာချာ မှတ်ထားရမယ်။
ဥ မုကိုက်တဲ့ ငါ့ညီကို ဥဟင်း ချက်မကျွေးရဘူး ဆိုတာ။
ဘယ်တော့မှ ထမင်းစားမဖိတ်ပါနဲ့တော့... လာမည်မဟုတ်တော့ပါ။
ဟွန်း.. တော်တော်ကိုဆိုးပါလား.. နှမြောစရာ..ဟိဟိ
တော်တော်ပါပဲ ဘကြီးတော်။ ဟင်းအိုးထဲ သေးပေါက်ချ
ရတယ်လို့ ။ ရာဇဝင် နှင့် ဥ ကို တဝါးဝါး တဟားဟားနှင့်
ကျနော်က ဘဲဥကြက်ဥဟင်းကို မရိုးတမ်း စားနိုင်တာ။
ဒီပိုပစ် ဖတ်ပြီး စိတ်ပြောင်းရတော့မယ်ထင်ပ...။
တော်ပါသေးတယ် ... ကိုဖိုးချိန်နဲ့ မျိုးမတော် ညီ၊ ညီမ မဖြစ်ရတာ ... မဟုတ်ရင်ကတော့ အချိန်တိုင်း ဟင်းခွက်နဲ့ သူ့မျက်နှာ ကြည့်ပြီး ထမင်းစားနေရမှာ haha
same same !! shake!! I don't like any eggs :( :(
but I have to now :( :(
by the way,how are u ? long time no see !!
ဟွန်းးး အဟောင်းတွေနဲ့ ဆားချက်နေတယ်ပေါ့လေ.... ဟုတ်လား...
မောင်လေးရေ ......... အရမ်းသတိရလို့ ရောက်လာတယ်။ မကြီးတို့လည်း မအားရင် ဒီကြက်ဥနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရပါတယ်။
အဟောင်းကို အပိုဒ်လေးနှစ်ပုဒ်လောက်တိုးပြီး ..း)
ပြန်ဖတ်သွားတယ် .. ငယ်ငယ်လေးတည်းကလဲ ကြိုကန်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်နော်?
ဥကို သေးပန်းတဲ့လူ သတိထား တော်ကြာ ထပ်ပန်းနေဦးမယ် အဟီးးး တော်တော် ဆိုးတဲ့ ကိုဖိုးစိန် ဥဟင်းတောင် ငြိမ်ငြိမ်မစားရတဲ့ ဘ၀ ဒီလာပါလေစေ ကြက်ဥကို ယောကျာ်းလုပ်ခိုင်းဦးမယ်
ကိုကြီးရဲ့ အရေးအသား တွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး
လေးတွေနဲ့ ရယ်ရတယ်...ဗျ ။
ကိုကြီးရဲ့ ဥရာဇ၀င်ကို လာအားပေးသွားတယ် ။
ညီမဂျစ်ရဲ့ အိမ်လေးကို မငြီးမငြူ လာအားပေး
အသစ်လေးတွေကို အားပေးနေတတ်တဲ့ ကိုကြီးကို
ကိုကြီး အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ....လို့ ဆန္ဒပြုပါရစေနော်။
ရလိုက်တဲ့ ဥက...တပွေ့ တပိုက်ကြီးတဲ့ လား... အကိုကမင်းကို...ဥ...ပေးချင်နေတာကြာပြီ...ဘာဥလဲ...သိလားမင်းသိပ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ....၀ဥ....ကဲပြောယူမလား....၀ဥနော်...၀ဥမှ...၀ဥစစ်စစ်..လုံးဝ...လုံးဝ...ေ၇မေ၇ာဘူး...ကြိုက်တယ်ဟုတ်...သိပ်ချစ်တဲ့ ...ညီလေးမှို့ ..ပေးမှာ..တခြားသူတွေအတွက်မရှိ...အမြန် အကြောင်းပြန်နော်ရှိတော့ ရှိတယ်..၇ှားတယ်...ကိုကြီး သုဒြေ္န
အရိုး ကို အားကျတယ် ထင်တယ် ဟဲဟဲ.. :P
ဟားဟား ဥမကြိဲုက်ဘုလား ဒါဆိုဖြုတ်ထားလိုက်အဲလေ ဟိုလိုပြောတာပါ အိမ်မှာ ဘဲဥတိုဘာဥတိုကို ဖြုတ်လိုက်ပေါ့လို မြင်နေရင် ဒေါသထွက်လိမ့်မယ်
ကိုကိုစိန်လုပ်လို့ ရိုးရိုးဥကနေ ပန်းဥ ဖြစ်ရပြီ....။
ဥဟင်းချက်စားတိုင်း ဒီပို့စ်ကို သတိရပြီး ပြုံးနေမိတော့
တို့လဲ ဒီဥ အဖေါ်လုပ်နေရတာ စိန်ရေ၊ ဂျီးများခဲ့တဲ့ ပါးစပ်လေ၊ ခုတော့...
တို့က ဘဲဥ ကြက်ဥ အရမ်းကြိုက်တာ..
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဦးဖိုးစိန် ပဲ တကယ့်ကိုရာဇ၀င်တွင်တဲ့ ဥ ဇာတ်လမ်းပဲ ။။။ အဟဲ အဟဲ .. ဟိ :P
ထမင်းစားရင်းနဲ့ ဖတ်နေတာ ဘာများဖြစ်မလဲပေါ့ စားနေတဲ့ ကြက်ဥကြော်ချက်လေးတောင် စားမရဲတော့ဘူး ဟွန့်.
အဲဒါ...ဝဠ်လည်တာ ကိုယ့်ဆရာ အဟားဟားဟား ...... နောက်ဆို ဥချည်းပဲ စားရလို့ လူပါဥရုပ်ပေါက်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင်တောင် ဥ ဥလို့ရနေမယ် သတိထား ဟားဟားဟားဟား
ရာဇ၀င်ထဲမှာ ဥ ကို ထားရစ်ခဲ့